Mwedzi. 7 kuverenga pamusoro pemakore makumi mashanu mushure mekukunda kwake. | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Comics, Fikisheni yesainzi, Bvunzo, Fantasy, Mabhuku
Zadziswa nhasi Makore makumi mashanu kubvira pakasvika munhu paMwedzi. Asi hatina kutsika pairi zvakare. Zvakanakisisa. Iyo ichiri ipapo yakadzikama, ichitivhenekera zvine mbiri mukutenderera kwayo kuzere kana ichidaidzwa. Uye kushandura makungwa nemweya yakatenderedza kwazviri, sesu isu takazvarwa vanopenga mwedzi uno uko kwave kutove nemwedzi miviri pamwe naye semutambi. Izvi ndizvo 7 akasarudzwa kuverenga kudzokera ipapo, kunyangwe zviripo pamwe nekufunga.
1 Kubva Pasi pano kuenda Kumwedzi - Jules Verne
2 Mwedzi - Ian McDonald
4 Mwedzi - Hannah Pang naThomas Hegbrook
6 Mhosva dzeMwedzi Wakazara - Kit Whitfield
7 Iyo Adventures yaTintin. Chinangwa: Mwedzi uye Kumhara Pamwedzi - Hergé
Kubva Pasi kusvika kumwedzi - Julio Verne
Sei kwete kutanga ne yakasarudzika yekare. Muoni Jules Verne akaburitsa ino in 1865. Uye zvaive zvakadaro zvake kubudirira uyo haana kuzeza kuenderera nayo Kukomberedza mwedzi, makore mashanu gare gare.
Kubva Pasi kusvika kumwedzi inotsanangura iyo gadziriro yekufamba muchadenga, uye Kukomberedza mwedzi inorondedzera iyo famba. Ose anotevera mapatani e kufambiswa kwesainzi, saka aripo mubasa raVerne, asi zvakare anozivikanwa kune iyo hupenyu hwehunhu hwayo uye kubata kwayo kwekuseka.
McDonald ndeye Welsh sainzi yekunyepedzera uye yekufungidzira munyori ane mibairo senge iyo Hugo kana Arthur C. Clarke. Izvi Mwedzi mutsva ndiro zita rekutanga re trilogy mutsa Game yezvigaro nehondo nekunyengera pakati pemhuri huru dzakatarisana. Rudzi rwevanhu rwakagadzira koloni pamwedzi uye inofanirwa kuronga nzanga, netsika dzayo, matambudziko ayo uye hunyengeri hwemhuri dzinoda kudzora satellite.
Garcia Llama ndiye Injiniya weNASA muHouston uye utiudze rwendo rwaApollo 11 kubva kuvhura kudzoka kuPasi. Zvinodaro nenzira yeruzivo umo ma protagonists ayo anotaura (zvinovimba nezvakanyorwa zviri pamutemo zvekubhururuka). Dzakati wandei dzendima dzayo dzinobatanidza ne biography yevemuchadenga, anecdotes y zvakaitika panguva yekubhururuka uye zvimwe zveichi chiitiko cheakaitika.
Mwedzi - Hannah Pang naThomas Hegbrook
Este bhuku rinodzidzisa iyo inotsanangura nhoroondo uye zvimwe chokwadi nezveMwedzi, ichikupa iyo Mashiripiti kubata hunhu ihwohwo hwakamupa nekufamba kwenguva. Kufuridzira kune vese, iri zita rinoedza kutsanangura kuti sei Mwedzi uchiramba uchigadzira kufadza kwakanyanya uye kufungidzira.
Nemubvunzo we kupi kwaungaenda kana uchinge wasvika kumwedzi, Andrew Smith anotaura kune vanoongorora muchadenga vachiri vapenyu vakatsika mwedzi. Uye anozviitawo kuti aone kuti hupenyu hwavo hwashanduka sei paakadzoka.
Mhedzisiro yacho ibhuku rine iyo zvipupuriro yeavo vaongorori avo, neimwe nzira kana imwe, vakabatwa zvechiitiko. Semuenzaniso, mumwe anogara achipa pikicha imwechete, mumwe anonyora nziyo nezve kumhara kwake pamwedzi, vanoverengeka vakatora kunwa, vamwe havadi kuziva chero chinhu nezve pasirese uye vamwe vanotambura nezvirwere zvepfungwa.
Mhosva dzemwedzi wose - Kit Whitfield
Zvimwe fungidziro inoverengeka ine mhosva yekunyengera nevamwe vanofungidzira vanokodzera pavanotambura simba reMwedzi: iyo Wolfman. Isu tiri mune nzanga umo chikamu chikuru chevagari chakagadzirwa newawolves. Ikoko Lola anogona, gweta revasingafarirwe, asi zvichidikanwa, sevhisi sehurumende inodzora lycanthropy, ichafanirwa kugadzirisa iyo kuponda kwevamwe vake vaviri. Panguva imwecheteyo, anoedza kururamisa hupenyu hwake hwekusurukirwa hunoratidzwa nerusarura nerusarura.
Iyo Adventures yaTintin. Target: Mwedzi y Kumhara paMwedzi - Hergé
Uye tinovhara ne rimwe bhuku rinonakidza nguva ino. Zvese zvifukidzo zveTintin zvinopfuura kuzivikanwa, asi izvo zvezviitiko izvi ndezvechokwadi zvikuru uye zvinorangarirwa, kunyanya kune iro roketi.
Hazvingadaro kuti mutori wenhau ane mukurumbira pasi rose haana kutsika paMwedzi. Saka zvakare iye akatarisira kukunda kweumambo mumavignettes eaya mavhoriyamu maviri iyo Hergé yakaburitswa muna 1950 uye 1954 zvichiteerana. Uye zvakare, Hergé akakurudzirawo iyo kuvapo kwemvura pamwedzi, chokwadi chakaedzwa nguva pfupi yadarika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Fikisheni yesainzi » Mwedzi. 7 kuverenga pamusoro pemakore makumi mashanu mushure mekukunda kwake.
MuTintin anofungidzira kuvapo kwemvura, chokwadi chakasimbiswa muna 2000, nechikepe Clementina, Verne's inotaura nyaya apo zvese zvinhu zvinotarisirwa nekururama kusingatsanangurike, bhuku rakanyorwa nevarume veHG Wells pamwedzi rakanga risipo mamwe mabhuku.
Hurukuro yakasarudzika naJael Lopumo: "Ndiri kufara nekuburitswa kwaLito en Marte naKaizen Editores"